संकटको समयमा चलखेल ? – Chitwan Post
- जोन कँडेल
विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट ग्रस्त छ, जसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। संक्रमित ९ जनामा १ जना निको भसकेका छन् भने बाँकी ८ जना भाइरससँग लड्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि कोराना भाइरसलाई जित्नुहुनेछ कामना गरौं। संख्या थोरै हो, तर संकट टरेको छैन।
थोरै ढिलो भए पनि सरकारले ‘लकडाउन’ गरेर संक्रमण रोक्ने एकमात्र उपाय लागू ग¥यो। तर सामाजिक सञ्जालको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका मानिसमा त्यो सूचना र लकडाउनको गम्भीरता महसुस नै भएको देखिएन। त्यो महसुस गराउन सुरक्षा निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ। आवस्यक परे सेना पनि क्याम्प बाहिर आउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
मार्ने बिथोल्ने धेरै प्रयास भए पनि हाम्रो समाजको सामाजिक सद्भाव र मानवीयता अझै मरेको छैन। कसैले भोको कसैलाई देख्न सक्दैन।
मैले छिमेकको एउटा भोकोलाई खाना खुवाएँ भने फेसबुकले नदेख्ला। तर, उसको भोकोपेटले राहात महसुस पक्कै गर्नेछ। हरेक छिमिकीले घरैबाट छिमेकको वस्तुस्थिती नियालौं। टोलको फेसबुक ग्रुप बनाऔँ, समस्या भए त्यही ग्रुपमा सेयर गरौं। समस्या परे सुरक्षाविधि अपनाएर सहयोग गरौं। एक मिटर दुरी कायम राखेर मास्क लगाएर समूहमा राहत बाँड्ने काम त्यति सुरक्षित देखिँदैन।
भावनामा बगिहाल्ने परिस्थिति पनि होइन यो। आहातमा हुनेहरूका लागि एउटा राहत संयन्त्रको तयारी पनि आवश्यक छ। यो राहात यस्तो चिज हो, हुने नहुने सबैलाई ‘मैले पनि लिन पाए’ भन्ने हुँदो रै’छ। हामी मानिस खानै पाएनौं भने हारगुहार आफैँ गरिहाल्छौं।
हारगुहारमा सहयोगचाहिँ गरौं। त्यसको लागि सरकारले पनि राहत प्याकेजको व्यवस्था गरेकै छ। राहतको नाममा गरिबीको मजाक गरिएको भनेर आलोचनाका स्वरहरू पनि सुनिन थालेका छन्। मार्केटिङवाला राहातलाई सुरक्षित र प्रभावकारी संयन्त्रद्वारा वितरण गर्ने विधि अपनाऔं।
नेपालको स्वास्थ्य प्रबन्ध कमजोर र फितलो रहेछ। सरसफाइमा मात्र हेलचेक्राईं होला भनेको आन्तरिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन पनि कमजोर रहेछ। रोगको संक्रमणमा बलियो हुनुपर्ने नै स्वास्थ्य क्षेत्र हो। डाक्टर, नर्सलगायत सम्पूर्ण स्वास्थकर्मी आजमात्र होइन, पहिलेदेखि नै असुरक्षित वातावरणमा काम गर्दै आएका रहेछन्। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई)को प्रयोग सधैँका लागि आवश्यक छ। यहाँ त बल्ल पिपिई लगाउन सिक्दैछन्। संक्रमणको अवस्थामा सम्पूर्ण नागरिकको ज्यान स्वास्थकर्मीको हातमा हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मापदण्डअनुसारको पिपिई उपलब्ध गराएर स्वास्थकर्मीको मनोबल र सक्रियता उच्च बनाउनुपर्छ।
अनि यो समय लोभ, लालच, बदला र प्रतिसोधको पनि होइन। राजनितिक बिचार र आस्थाको पनि होइन। बिचार र आस्थाको कारण सरकार विरूद्ध खनिने समय पनि होइन। गुठे आक्रोश पोख्ने समय पनि होइन। सरकारको सक्रियता र जनताको सहयोगी एकता अहिलेको आवश्यकता हो। यस्तोबेला लाभ लिने तत्त्व पनि सक्रिय हुन्छन्। त्यस्ता तत्त्व परिवार, समाजदेखि सरकारसम्म पनि हुन्छन्।
चोरी गर्ने, लुट्ने, तस्करी गर्ने, अनवश्यक भ्रम सृजना गर्ने, कमिसन खाने सलबलाउने पनि यस्तै परिस्थितिमा हो। यस्ता अपराधिक गतिविधि रोक्न भएका सरकारी संयन्त्रको सक्रियता आवश्यक हुन्छ भने आवश्यकताअनुसार अरू संयन्त्र पनि थप्नु पर्छ।
देश दुख्दा सबैलाई दुख्नुपर्छ र दुखाई एउटै हुनुपर्छ। सरकारी प्रक्रियाको जटिलताको कारण स्रोतसाधन जुटाउन ढिला भएको अवस्थामा निजी क्षेत्र र गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए)को साथ र सहयोग जुनरूपमा हुनुपर्ने हो त्यो कमजोर देखिन्छ। गर्नैपर्छ भन्ने होइन, तर यस्तो अवस्थामा गैरजिम्मेवार जस्तो बन्नु पनि हुँदैन। आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन यतिबेला सरकारलाई भन्दा निजी क्षेत्र र एनआरएनएलाई सहज हुन्छ। उहाँहरूको सहयोग आउन किन ढिला भयो होला? यथाशीघ्र सहयोगको अपेक्षा गरौं।
बहुदलीय व्यवस्था हो भन्दैमा विश्व संकटमा राजनीतिक अभिस्ट पूरा गर्न खोज्नु पनि अपराध नै हो। मध्यावधी निर्वाचन, सर्वदलीय सरकारजस्ता विपक्षी दलका केही फरक स्वरहरू यतिबेला साह्रै निम्न स्तरबाट प्रस्तुत हुनु अस्वाभाविक मात्र होइन, घृणित नै हो। विपक्षीले सरकारलाई सहयोग गर्ने र जिम्मेवार बनाउने हो भने सरकारले पनि सर्वदलीय बैठक डाकेर सहयोग माग्ने र सबै दललाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। संकटमा अहम र प्रतिशोध दुवै घातक हुन्छन्। संकटको घडीमा सबैले सरकारलाई सहयोग गर्ने हो, सरकारलाई सहयोग गर्नुको अर्थ यो होइन कि उसका गलत काम र निर्णयप्रति मौन रहनुपर्छ।
संकटको समयमा अनियमिता गर्नु भ्रष्टाचारमात्र होइन, देशद्रोह हो। संकटमा सरकार साविकभन्दा कयौं गुणा बढी सकृय हनुपर्छ। दुःखको अवस्था, यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री नै स्वयम् स्वास्थ संकटमा हुनुहुन्छ। लकडाउन, कोरोना अस्पताल, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनजस्ता कार्यमा सरकारको सक्रियता देखिए पनि आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेको देखिँदैन। कोरोना अस्पताल त भन्यो, तर आवश्यक स्रोतसाधनको अभाव देखियो। आवश्यक सामग्रीको अभावमा अन्य अस्पतालले पनि बिरामी उपचार गर्न नसक्ने अवस्था आयो।
पूर्व तयारीको समयमा सरकार आफैँं रिंग्यो वा कसैले रिँगायो, जसले गर्दा तयारीको समय पाउँदा पनि सरकार काम गर्नबाट चुक्यो। अर्कोतिर भ्रमण वर्षको भस्त चढेर पर्यटक भित्र्याउने अहमले पर्यटनमन्त्रीले नै संक्रमणको गाम्भीर्यता बुझ्न सकेनन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि सरकार आफ्नै नजिककाबाट आर्थिक अनियमितताको सिकार बन्न पुग्यो। यी सरकारका कमजोरी हुन्।
सरकार र मन्त्रीमा अहम छ। मन्त्री हरेक क्षेत्रमा विज्ञ हुँदैनन्। मन्त्रीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट आवश्यक परामर्श लिएर काम गर्नुपर्छ। सरकार एककदम अघि हुनुपर्छ, तर नागरिक आवाजको पछिपछि लत्रिएको छ। सरकारले आफ्नो हैसियत औकात र क्षमताले भ्याएसम्म गरेकै छ बिचरा !
डाक्टरले पनि भगवान् भरोसा भन्ने अवस्था आएको हुन्छ। विज्ञानभन्दा फरक विश्वासमा अस्पताल प्राङ्गणमा मन्दिर स्थापना गरिएको हुन्छ। आध्यात्मिक सोचलाई वाहियात हावा भनेर इन्कार नगरौं। आउनुस् विश्व संकट मुक्तिको लागि कामना गरौं। हे भगवान् अल्लाह खुदा ईश्वर पर्मेश्वर !
व्यवसायी घिमिरेद्वारा भाडा छूटको घोषणा